Iifashoni eziHambelwayo kunye nezinye Izizathu ekufuneka uzichebe Amadoda aQinisekileyo
UPaco Maria Garcia | | Ukunyamekela
Nangona isihloko sokwendiswa kwamadoda iseyi-taboo, mihla le amadoda amaninzi ashiya ucalucalulo ngasemva kwaye abe nobuganga bokwenza njalo Phila ngaphandle kweenwele ezixineneyo nezinika ubushushu.
Zeziphi izibonelelo onokuzifumana? izizathu zokuba kutheni kufuneka uthambile? Asingombuzo wobuhle nje kuphela, zininzi izinto ezidlalayo.
Los ba mbaleki Amacandelo amakhulu athambekele ekuthiseni umzimba, ukubheja kwisitayile esicocekileyo kwaye ngaphandle kwengxaki ukubila. Ukongeza, njengoko ukuthanjiswa kusenziwa rhoqo ngenxa yokunqumka kwemisipha okunokwenzeka, i-massage engenazinwele ithe ngqo kulusu.
Ukongeza, xa uthambisa indawo ye-pubic unokubona ngokulula okungaqhelekanga kulusu, Ukufumanisa kwangexesha iimpawu ezinokubakho zesifo.
1 Izibonelelo zokuthambisa
1.1 Ukuphucula ucoceko
1.2 Uninzi lwezihlunu ezibonakalayo
Ukuba uyazibuza ukuba kutheni kufuneka uthambile, Nazi ezinye zezizathu
Abantu abaneenwele zomzimba bathambekele ekubeleni ngakumbi, ukubila kuqokelela phakathi kweenwele, Ukuvelisa ukudityaniswa kweentsholongwane kunye nevumba elibi. Ngesi sizathu, amadoda ahlala ngokuthambisa, avela ivumba elingcono kwaye bathambekele ekubeni nempilo entle kulusu lwabo.
Uninzi lwezihlunu ezibonakalayo
Ukuba ufuna bonisa izihlunu zakho ezinethoni, oyiphumeleleyo ngomzamo omkhulu kunye nokuzilolonga, apho unesizathu esivakalayo sokuba kutheni kufuneka uthambile.
Njengoko sele sibonile, iinwele zisenza sibile ngakumbi, phakathi kwezinye izinto ngenxa yobushushu obuveliswayo. Xa sithambisa umthondo siziva sihlaziyeka.
Ukuba imalunga nokubonelela ngomfanekiso, nangasiphi na isizathu sobungcali, kufuneka ucoceke kwaye ucoceke. Olunye uphononongo lubonisa ukuba amadoda achetyiweyo anika i- imvakalelo yokuba mnandi ngakumbi, ubuthathaka kunye nomtsalane.
Lo mfanekiso uza kuququzelela umbono omhle womsebenzi (Cinga, umzekelo, kubaqeqeshi bezemidlalo, abaqeqeshi, abagcini bamadama okudada, njl. Ukongeza, inokukunceda ufumane iqabane onothando olifunayo.
Imithombo yemifanekiso: Iklinikhi yaseTufet / iLaser Natura Barrio Salamanca
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zeziphi izizathu onokuthi uthimbe ngazo?
Iingcebiso malunga nokuqhekeka